Hlanganisa i-Google Adwords ne-Salesforce ne-Bizible Analytics | Martech Zone
NgoMsombuluko, Novemba 17, 2014 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 4, 2017 Douglas Karr
Okubonakalayo ikuvumela ukuthi uhlaziye ukusebenza kwama-Adwords akho ngokususelwe ekuguqulweni kunokuchofoza, okukuvumela ukuthi usebenze ngokuhlukile ne-Salesforce ukukala ukusebenza ngokuya ngomkhankaso, iqembu lesikhangiso, okuqukethwe kwezikhangiso, neleveli yamagama angukhiye. Kusukela Okubonakalayo isebenza ngokulandela umkhankaso wamanje ku-Google Analytics, ungakwazi ukulandelela kalula iziteshi eziningi kuyo yonke imikhankaso yokusesha, yezenhlalo, ekhokhelwayo, i-imeyili neminye imikhankaso.
Izici ezibalulekile ezisohlwini lweBizible site
I-AdWords ROI - kukuvumela ukuthi ushaye ujule ku-AdWords ROI emkhankasweni, eqenjini lesikhangiso, kokuqukethwe kwesikhangiso, nasezingeni lamagama asemqoka, ukuze ukwazi ukukala futhi wenze izinqumo zokwenza usesho ngokuya ngemali engenayo.
Ukulandela Iziteshi Eziningi - ibika imingcele ye-UTM yesitayela se-Google Analytics ngqo ku-Salesforce, okwenza ukuhlola nokwenza ngcono noma yimuphi umkhankaso wokukhangisa online nge-ROI kube lula.
Umlando Wokuhola Oningiliziwe - Hlomisa iqembu lakho lokuthengisa ngolwazi lokumaketha abaludingayo ukuvala amathuba amaningi. Bona ukuthi imikhondo yakho ixhumana kanjani nesayithi lakho ngaphambi kokuthi iguqulwe, kanye nayo yonke imininingwane efanelekile yokumaketha.
Imibiko Yokwezifiso - Ukumaketha oku-inthanethi kuya ngokuya kuba yinkimbinkimbi futhi kwahlukaniswa. Yakha imibiko yesitoko esetshenziswayo, kanye nemibiko yangokwezifiso engacishe ikhawulelwe ukulingana ibhizinisi lakho.
Ukuhlanganiswa okuningi - Kusuka kuzibuyekezo zeSalesforce ezisheshayo zokumaketha ezishintshayo, amasistimu wokuphathwa kokuqukethwe kanye ne-Optimizely for A / B Testing. Ama-60% we Okubonakalayo amakhasimende asebenzisa iMarketo, I-Hubspot, Act-On, noma i-Eloqua. IBizible ibuye ibe nokufakwa kokuchofoza okukodwa ngeWordPress, Joomla, noma iDrupal.
Ungathola Iyabonakala ku-Saleforce AppExchange.
Tags: ukuhlolwaI-Act-Onukuguqulabizibleizinhlelo zokuphathwa kokuqukethweDrupaleloquai-google adwordsindawoI-joomlaukuzenzekelayo kokuzenzekelayoumabhebhanangokugcwelesalesforceukuguqulwa kokuthengiselanaabathengisi ppcWordPress
Nika amandla Ukuthengiswa Komphakathi Esizeni Sakho se-Ecommerce nge-GetSocial